January 2017 – Arakan Times
AT Burmese ဦးကိုနီရဲ့ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း
January 31, 2017	Leaveacomment 650 Views
ဦးကိုနီကို ဖခင် ဦစူလတန်၊ မိခင် ဒေါ်ခင်လှ (ခ) ဒေါ်ဟလီမာတို့က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာ မြို့နယ်၊ အင်းရွာကျေးရွာမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၆၅ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ကသာမြို့ အ.ထ.က (၁) ကျောင်း ကနေ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်ကနေ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ B.A (Law) ဘွဲ့၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ LL.B ဘွဲ့တွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၅-၁၉၇၆ ပညာသင်နှစ်အတွင်းမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေအသင်းကြီးရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၇၉ ခုနှစ် အတွင်း ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာန မှာ နည်းပြဆရာ အဖြစ် ...
AT Burmese စစ်တပ်ကငွေညှစ်ခြင်းနှင့်ငါးလုယက်ခြင်း၊မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းများပြုလုပ်နေဆဲ
January 31, 2017	Leaveacomment 966 Views
တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့နယ်ခွဲပိုင်ရေတွင်းပြင်ကျေးရွာ၌အခြေစိုက်လျက်ရှိနေသောစစ်တပ်များသည်ဈေးဆိုင်များမှဈေးပြု၍ငွေမပေးခြင်း၊ပိုက်သမားနှင့်ပုစွန်ကန်လုပ်ကိုင်သူများမှငါးများလုယက်နေသည့်အပြင်ငွေလည်းညှစ်ယူနေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ ၃၀၊၁၊၂၀၁၇ခုနေ့နံနက်မိုးလင်းချိန်တွင်ငါးရှာရန်အိမ်မှထွက်သောတံငါသည်များကိုစစ်တပ်က၎င်းတို့ကိုဖမ်းပြီးပုဒ်မ၁၄၄ကိုကျူးလွန်သည်ဟုအကြောင်းပြ၍ငွေညှစ်ခဲ့ပါသည်။ငွေညှစ်ခံရသူများမှာ ၁။ဦးပူတီယာ(ဘ)မိုဖီးဇူရာမာန်၊ငွေကျပ်၁သောင်း ၂။ဦးလာလူး(ဘ)ဇော်ဘောရ်အာလီ၊၁သောင်း ၃။ဦးရှူနာများ၏သားမက်(ကျွန်းခေါင်ရွာ)မှ၅သောင်းအသီးသီးညှစ်ယူခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင်ပြူးမချောင်း၌ထောင်နေသောကျားပိုက်၊ရံပိုက်နှင့်မျောပိုက်သမားတို့မှငါးကောင်း၊ငါးကြီးများကိုလိုသလောက်မယူဘဲရရှိသောငါးအနက်လေးပုံမှသုံးပုံလုယူ၍စားခြင်းမဟုတ်ဘဲအခြောက်နေကြောင်း၊ပုစွန်ကန်မှရသမျှပုစွန်ကိုလည်းယူဆောင်လာကြောင်းမျက်မြင်ဒေသခံတစ်ဦးမှAT newsသို့ပြောပါသည်။ ၂၈၊၁၊၂၀၁၇ခုနေ့ညတွင်ရေတွင်းပြင်အရှေ့ရွာမှအိမ်ထောင်သည်အမျိူးတစ်ဦးကိုမုဒိမ်းကျင့်ကြောင့်သတင်းရရှိပါသည်။ ၂၉၊၁၊၂၀၁၇ခုနေ့တွင်မောင်တောင်ပိုင်းချိန်ခါလီရွာမှအိမ်ထောင်သည်အမျိူးသမီးတစ်ဦးနှင့်အပျိူမနှစ်ဦးကိုလည်းမုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။မုဒိမ်းကျင့်ခံသူများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းလိုလျှင်AT newsသို့ဆက်သွယ်ပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
January 31, 2017	Leaveacomment 2,042 Views
၁။၁၉၈၂ခုနှစ်မြန်မာနိုင်သားဥပဒေအရ (က)(နိုင်+နိုင်)မိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသောသားသမီးများ (ခ)(နိုင်+ဧည့်)မိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသောသားသမီးများ (ဂ)(နိုင်+ပြု)မိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသောသားသမီးများ (ဃ)(ဧည့်+ဧည့်)မိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားပြီးအမည်စာရင်းထည့်သွင်းပြီးသောသောသားသမီးများ (င)(ပြု+ပြု)မိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားပြီးအမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီးသောသားသမီးများ (စ)(ဧည့်နိုင်သားတတိယမျိူးဆက်)မြေးများ (ဆ)ပြုနိုင်ငံသားတတိယမျိူး(မြေး)များ မိဘ၏အထောက်အထားမှာသားသမီးအတွက်အထောက်အထားဖြစ်သည်။ ၂။အမျိူးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား(အမတ)NRCသုံးခေါက်ချိူးကိုင်ထားသူများ ရခိုင်ပြည်ရှိရိုဟင်ဂျာများအနက်NRCကိုင်ဆောင်ခဲ့သူအများအပြားရှိပါသည်။၁၉၈၉ခုနှစ်တွင်ရခိုင်ပြည်ရှိရိုဟင်ဂျာအားလုံးသည်ပုံစံ(နိုင်)(၁)နှင့်ပုံစံ(နိုင်)(၂)ဖြည့်စွက်ခဲ့သူများဖြစ်သော်လည်းနိုင်ငံတော်မှနိုင်သားစီစစ်ရေးထုတ်မပေးဘဲ၁၉၉၄ခုနှစ်မှစ၍ယာယီမှတ်ပုံတင်ကိုသာထုတ်ပေးပြီးသမ္မတဦးသိန်းစိန်က၎င်းယာယီကဒ်ကိုရုပ်သိမ်း၍ယာယီအပ်နှံကြောင်းဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုသာထုတ်စေပါသည်။ အဆိုပါဖြတ်ပိုင်းနှင့်သွားလာသော်လည်းယခုတွင်မူ၎င်းနှင့်သွားလာခြင်းမပြုရန်တောင်ပြိုမြို့နယ်ခွဲ၌နယ်ခြားစောင့်(မခဖ)များကတားမြစ်ခြင်း၊NVCကိုင်ဆောင်ရန်ဖိအားပေးခြင်းများလုပ်လေ့နေကြပါသည်။ ၃။နိုင်ငံသားလက်မှတ်UCCကိုင်ထားသူများ ၄။မိဘ၏နိုင်သားလက်မှတ်UCCတွင်အမည်စာရင်းထည့်သွင်းပြီးသောသားသမီးများ ၅။မူလကစီစစ်ရေးကဒ်ပြားတစ်ခုခုကိုင်ဆောင်ခြဲ့ပီးအကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့်ပျောက်ဆုံးပျက်စီး၍မည်သည့်အထောက်အထာမျှလက်ဝယ်မရှိတော့သူများမိတ္တူလျှောက်ရန်ဖြစ်သည်။အသစ်လျှေက်ရန်NVCကိုင်ဆောင်ရန်မလို ၆။အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်စီစစ်ရေးကဒ်ပြားကိုင်ထားပြီး(၁၈)နှစ်ပြည့်စီစစ်ရေးကဒ်လျှောက်ထားသူများNVCကိုင်ရန်မလို ၇။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးထုတ်ပြန်ချက်အပိုဒ်-၁၀(ဃ)အရအိမ်ထောင်စုလူဦးရေးစာရင်း ပုံစံ၆၆/၆ရရှိကိုင်ဆောင်ထားသူများNVCကိုင်ဆောင်ရန်မလို “အိမ်ထောင်စုလူဦးရေးစာရင်းပုံ၆၆/၆မရှိသူများ၊မည်သည့်ကဒ်ပြားမျှရှိသည်ဖြစ်၊မရှိသည်ဖြစ်စေ၊နိုင်ငံသားဖြစ်စေ၊နိုင်ငံခြားသားဖြစ်စေအိမ်ထောင်စုလူဦးရေးစာရင်းလျှောက်ထားရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၈။တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှမည်သည့်အထောက်အထားကိုမျှကိုင်ဆောင်ခြင်းမရှိသူများသာလျှင်NVCကိုင်ဆောင်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်မိဘပြည်သူများသည်နိုင်ငံတော်၏ကဒ်တစ်မျိူးမျိူးကိုင်ဆောင်ထားသူများမှမွေးဖွားလာသောသားသမီး၊မြေးများဖြစ်သောကြောင့်NVCကိုင်ရန်မလိုအပ်ပါကြောင်းAT newsမှတစ်ဆင့်မိဘပြည်သူများသို့အသိပေးအပ်ပါသည်။
Annan Commission visits Kutupalong registered refugee camp
January 31, 2017	Leaveacomment 996 Views
AT Correspondent, Ukhiya The three member delegation of Myanmar Advisory Commission on Arakan/Rakhine State has visited the Kutupalong registered Rohingya refugee camp for the 2nd day where they met with camp leaders and spoke with them regarding the issues of Rohingya which the delegates listened carefully. According to our correspondent report, the delegation comprising of three members, U Win ...
January 30, 2017	Leaveacomment 822 Views
Ref: 01_Jan_17 Date: 29 January 2017 ...
Myanmar forest authority confiscates tree plantation of Rohingya
January 29, 2017	Leaveacomment 1,080 Views
AT Correspondent, Maungdaw A large tree plantation full of trees belonging to Rohingya residents in Nayapara of Goduthaya union, Maungdaw south has been confiscated by Myanmar forest department of Maungdaw. The garden is 10 acre of land where many thousands of teak trees and many other kinds of trees were full of the garden. The garden land had been belonged ...
Prominent Muslim lawyer shot dead in Myanmar
January 29, 2017	Leaveacomment 1,279 Views
YANGON, Jan 29 — A prominent Muslim lawyer and member of Myanmar’s ruling party was shot dead along withataxi driver outside Yangon’s international airport today, officials said. Ko Ni,amember of Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy party, was gunned down as he got intoataxi outside arrivals around 5pm (1030GMT) by an ...
AT. Burmese ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရးမှူးငွေညှစ်မှုမရပ်သေး
January 29, 2017	Leaveacomment 856 Views
တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ နယ်ခွဲပိုင်ရေတွင်းပြင်ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးသည်ရွာသူရွာသားများကိုအာဏာရှင်ဆန်ဆန်၊ဘုရင့်မိသားစုလိုအထင်ကြီးပြီးငွေညှစ်ယူမှု၊ဓားပြမှု၊လူသတ်မှုပေါင်းများစွာကျူးလွန်ခဲ့သောအချက်အလက်ပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ ၂၈၊၁၊၂၀၁၇ခုနေ့ရေတွင်းပြင်တောင်ရွာနေဦးအဒူဆာလာမ်(ဘ)မုစ်တော်ဖာထံမှကျွန်းပေါက်ဖာလီပြင်ရွာနေဦးဂုလ်ဟူးဆောင်သည်ကျွဲတစ်ရှဉ်းဝယ်ယူလာချိန်တွင်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးဦးရှုနာများက၎င်းအားရပ်တန့်စေ၍ငွေကျပ်၈သောင်းအတင်းတောင်းယူညှစ်ခဲ့ကြောင်းကျွဲဝယ်သူ၏ပြောပြချက်အရသိရှိရပါသည်။ ရေတွင်းပြင်ကျေးရွာသူ/သားများကျွန်လိုကျင့်ဆောင်ခြင်းသည်လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်စေချင်ပါသည်။ ၎င်းအပြုအမူများကိုရပ်တန့်စေရန်နှင့်ငွေကျပ်မပေးလျှင်အိမ်ကိုတရားမဝင်အဆောက်အဦစာရင်း၌ထည့်ပေးမည်ဟုခြိမ်းခြောက်၍ညှစ်ယူခဲ့သောငွေများကိုဆင်းရဲသားများအားပြန်လည်ပေးပါရန်AT newsမှတစ်ဆင့်သတိပေးအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ဒုစရိုက်များကိုမစွန့်လွန်နိုင်ပါကအသင်၏ဒုစရိုက်ဟူသမျှမီဒီယာသို့တစ်ခုမကျန်တက်လာလိမ့်မည်။
January 28, 2017	Leaveacomment 850 Views
By Jonah FisherBBC News, Myanmar 27 January 2017 Top of Form Bottom of Form A government-appointed investigation is due to publish its final report on whether atrocities have been committed against the Rohingya minority in Myanmar, also known as Burma. With journalists banned from northern Rakhine state, the Burmese government has been trying to counter allegations that its soldiers ...
January 28, 2017	Leaveacomment 1,065 Views
AT Correspondent, Maungdaw Myanmar security forces have still been conducting raids in villages of Maungdaw north where the arrests of Rohingya are made frequently for which the residents are desperate to flee to Bangladesh to escape further violence. According to our correspondent reports, the members of army enter the Nandakhali, Zammonia and Tingorzapar and arrest innocent people in regular ...